Ii-FAQs - Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd.
A: Ukuba umthengi ufuna ukwenza ukungunda okutsha, ewe kufuneka ahlawule umrhumo wokubumba kuqala, iya kuba ngama-2300- $ 2800. Kwaye siya kuyibuyisa le mali xa umthengi ebeka iiodolo ezine zesikhongozeli esingu-20GP.
I-Q11: Luhlobo luni lwesatifikethi osiphumeleleyo?
I-Q12: Loluphi uhlobo lwesatifikethi osiphumeleleyo?
I-Q13: Ngabaphi abathengi obapasileyo uhlolo lomzi-mveliso?
I-Q14: Injani inkqubo yakho yokuthenga?
Q15: Uthini umgangatho wabanikezeli benkampani yakho?
Q16: Usebenza ixesha elingakanani ukusebenza kwakho? Ungayigcina njani imihla ngemihla? Yintoni amandla eseti nganye yokufa?
Q17: Yintoni inkqubo yakho yemveliso?
Q18: Lixesha elingakanani eliqhelekileyo lokuhanjiswa kweemveliso zakho?
I-Q19: Ngaba unayo ubuncinci be-odolo? Ukuba kunjalo, buthi ubuncinci bobungakanani beodolo?
I-Q20: Uthini umthamo wakho opheleleyo?
Q21: inkulu kangakanani inkampani yakho? Lithini ixabiso lemveliso yonyaka?
Q22: Sesiphi isixhobo sovavanyo onaso?
Q23: Yintoni na inkqubo umgangatho wakho?
Q24: Sithini isivuno semveliso yakho? Yenziwe njani loo nto?
I-Q25: ide kangakanani inkonzo yobomi beemveliso zeWPC?
Umbuzo: Leliphi ixesha lokuhlawula oya kulamkela?
I-Q27: Xa kuthelekiswa neenkuni, yintoni inzuzo yeemveliso ze-WPC?
I-Q28: Ngaba iimveliso ze-WPC zifuna ukupeyinta? Nguwuphi umbala onokubonelela ngawo?
WPC decking umgangatho, WPC decking edityanisiweyo, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC decking ngaphandle, WPC nokwadala, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC,